Iimveliso abavelisi kunye nababoneleli - China iMveliso yeZinto
Iplatifomu yamafu eNengqondo
Iqonga le ImCloud
Utshintsho lweZiko ledatha
L3 + Tshintsha
Ukutshintsha kwemizi mveliso
Ukutshintsha kwemizi mveliso yeL3
Utshintsho olulawulwayo olulula
I-AP ebekwe eludongeni
Umlawuli woFikelelo lweSMB
Isango loKhuseleko oluPhambili
Isizukulwana esilandelayo se-Firewall
Isisombululo seNethiwekhi yeCampus
Isisombululo seNethiwekhi seDatha
Isisombululo senethiwekhi ye-ISP
WL8200-I1 802.11ac In- D ...
I-DCFW-1800 uthotho olulandelayo ...
I-DCRS-7600E yeeNdawo zoMxholo weLaye ...
ES420-26P L2 Gigabit yokuLawulwa koLawulo olulula lokuFikelela
I-DCN ES420-26P yi-Gigabit Managed Ethernet switch, ebonelela nge-24 10/100 / 1000Mbps RJ45 kunye ne-2 SFP port. Izibuko ngalinye lixhasa umsebenzi ozenzekelayo we-MDI / MDIX, kwaye unokufikelela kwisantya sokudlulisa isantya. Iswitshi ye-ES420-26P siswitshi yolawulo lwenethiwekhi eyi-gigabit Layer 2 eyilelwe kwaye yaphuhliswa ngokuzimeleyo ekwakheni uthungelwano oluphezulu lwegigabit. Inika inkqubo yokhuselo ebanzi, imigaqo-nkqubo yeQoS epheleleyo, kunye nemisebenzi yeVLAN etyebileyo. Kulula ukulawula nokugcina, kwaye ngaba ...
I-ES420-10P L2 yoLawulo oluLula yoLawulo
I-DCN ES420-10P ibonelela nge-8 * 10/100 / 1000M auto MDI / MDIX function kunye ne-2 * SFP port enokuqonda ukuhambisa isantya socingo. Inokuxhasa i-ACL esekwe kwizibuko, ukufezekisa ngokulula ukubeka esweni inethiwekhi, ulawulo lwezithuthi, intetho ephambili kunye nokuhamba phambili kwezithuthi; Inkxaso ye-STP / i-RSTP / i-MSTP ye-L2 iteknoloji yokukhusela ikhonkco, iphucula kakhulu ikhono lokuxhamla kwikhonkco, ukuqinisekisa ukuzinza kwenethiwekhi; Xhasa i-ACL esekwe kuluhlu lwamaxesha ukufezekisa ulawulo oluchanekileyo lokufikelela ngokulula; Inkxaso yokuqinisekiswa kwe-802.1x esekwe kwi-MAC nakwip ...
I-DIN-Rail L2 yokutshintsha kwemizi-mveliso
I-IS2100D (R2) Uthotho lomatshini wotshintsho uhambisa uqhagamshelo olukhawulezayo lweGigabit Ethernet kwifom ye-compact factor kwaye yenzelwe uluhlu olubanzi lwezicelo zeshishini apho iimveliso ezilukhuni zifunekayo. Iqonga lakhelwe ukumelana neemeko ezinzima kwimveliso, amandla, ezothutho, ezemigodi kunye nezixeko ezifanelekileyo. Iqonga le-IS2100D (R2) likwalungele ukwandiswa kwamashishini kwiindawo ezingaphandle, kugcino, nakumaziko okuhambisa. Olu tshintsho luqhuba isoftware esekwe ...
IS5600G-2U / IS5600XG-2U Ukutshintsha kwemizi-mveliso
IS5600G-2U / IS5600XG-2U umaleko 3 yemodyuli gigabit switch ethernet isekela iiprotocol zeLay 2/3. Inika umsesane wangaphakathi wokuphinda usebenzise into enokuba lukhetho olufanelekileyo kulungelelwaniso lobungakanani ngaphakathi koomatshini bokusebenza kunye nenkqubo yolawulo lwezicelo. I-IS5600G-2U / IS5600XG-2U ibonelela nge-8- port 1000Mbps Ethernet modular slots kunye ne-4 port 1000Mbps / 10Gbps seemodyuli slot kwiphaneli engaphambili. Imodyuli ye-combo Giga port inikezela nge-SFP ujongano lwe-GE / 10G uplink okanye kwi ...
IS5600 Uthotho L3 Swich
I-IS5600 uthotho lweemodyuli zegigabit zotshintsho lwe-ethernet zixhasa iiprothokholi ezi-2/3 ezipheleleyo. Inika umsesane wangaphakathi wokuphinda usebenzise into enokuba lukhetho olufanelekileyo kulungelelwaniso lobungakanani ngaphakathi koomatshini bokusebenza kunye nenkqubo yolawulo lwezicelo. Iimpawu kunye neZibonelelo eziPhambili kwiimpawu ezingabandakanyi isantya esipheleleyo seLay2 / 3 phambili i-Multiple Ethernet ye-interfaces ye-Ring ukukwazi ukufumana ukubuyiswa kwenethiwekhi. Idityaniswe nesoftware yolawulo lweSNMP ukubonelela nge-netw ...
I-DCN CS6200-EI yokutshintshela uthotho lobhedu sisizukulwana esilandelayo sokutshintsha kweendlela ezinokubonelela ngokufikelela gigabit kunye namazibuko e-10GE e-uplink. Iswitshi yobhedu ye-CS6200-EI inezixhobo eziphambili kunye noyilo loyilo lwesoftware. Olu tshintsho lubonelela ngokufumaneka okuphezulu, ukusasazeka, ukhuseleko, ukusebenza kwamandla, kunye nokusebenziseka ngokulula ngezinto ezinesityebi ezinje nge-VSF (i-Virtual switch Framework), i-IEEE 802.3at yokuzikhethela kunye nokunikezelwa kwamandla okungafunekiyo. Ilungele ukudityaniswa koxinano oluphezulu okanye umaleko osisiseko ...
CS6200 (R2) Dual Stack 10G Ethernet Routing Fibre Tshintsha
I-DCN CS6200-EI yocingo lotshintsho lotshintsho sisizukulwana esilandelayo se-10GbE istackable routing switching ezibonelela ngokufikelela gigabit optical kunye ne-10GbE uplink port. Iswitshi yefayibha ye-CS6200-EI inezixhobo eziphambili kunye noyilo loyilo lwesoftware. Olu tshintsho lubonelela ngokufumaneka okuphezulu, ukusasazeka, ukhuseleko, ukusebenza kakuhle kwamandla, kunye nokusebenziseka ngokulula kwezinto ezinobutyebi ezinje nge-VSF (Isakhelo sokuTshintsha okuSebenzayo), izinto ezingafunekiyo zombane. Ilungele ukudityaniswa koxinzelelo oluphezulu kwizisombululo ze-FTTx okanye ca ...
EAP380-E SMB Smart yangaphakathi 802.11ac wave2 Dual Band AP
I-DCN EAP380-E yindawo yokufikelela ngaphandle kwamacingo (i-AP) eyilelwe intengiso ye-SMB. Inika iinkonzo zenkxaso ebanzi kunye neempawu zokuthembeka okuphezulu, ukhuseleko oluphezulu, ukuthunyelwa kwenethiwekhi okulula, ukufunyanwa okuzenzekelayo kwe-AC kunye noqwalaselo, kunye nolawulo lwexesha lokwenyani kunye nolondolozo, oluhlangabezana neemfuno ezilula zokuhanjiswa kwenethiwekhi. I-AP ihambelana ne-802.11ac wave 2 imigangatho yokuthobela kwaye inokunika ubuninzi be-1.167Gbps yokuhamba-i-300Mbps kwi-2.4G ene-2 ​​× 2, i-867Mbps kwi-5G ene-2 ​​× 2. I ...
EAP280-E SMB Smart yangaphakathi 802.11n Ibhendi enye ye-AP
I-EAP280-E lishishini elitsha elingenaxabiso kwi-Wi-Fi AP (Indawo yokuFikelela) eyaziswa yiDCN. Le AP ixhasa umgangatho we-802.11n nge-Mega Ethernet ephezulu yokunxibelelana. I-EAP280-E isebenza kwi-band ye-2.4G kwaye ubuninzi bokuhamba bunokufikelela kwi-300Mbps. I-EAP280-E ibonelela ngokusebenza okunobuninzi kunomathotholo, iselfowuni, ukhuseleko kunye nobunjineli bezithuthi njl.njl. ...
EAP220 Smart 802.11ac Dual Band ngaphakathi-eludongeni AP engenazingcingo
I-EAP220 inokufakwa kwipaneli esemgangathweni ye-x86, ngaphandle kokwakhiwa kwakhona kodonga ukugcina iindleko kunye nexesha, kunye nokukhusela umhombiso wokuqala. I-EAP220 ixhasa ibhendi engama-802.11AC esemgangathweni2.4G kunye ne-5G, kwaye ixhasa eyona bandwidth iphezulu engenazingcingo ye-733Mbps. I-EAP220 ibonelela nge-100M uplink Ethernet port, enye ezantsi ye-100M Ethernet port kunye ne-RJ11 port port enye. Izibuko le-uplink linokuxhasa i-802.3af POE, ke i-EAP220 ayinokubonelela ngokusebenza okuphezulu kwe-WIFI, kodwa ikwanokunika ...
I-EAP180 i-Smart 802.11n iBhendi engabodwa eludongeni lwe-AP engenazingcingo
I-EAP180 inokufakwa kwipaneli esemgangathweni ye-x86, ngaphandle kokwakhiwa kwakhona kodonga ukonga ixesha kunye neendleko. I-EAP180 ixhasa umgangatho we-802.11n kwaye isebenza kwibhendi ye-2.4G, inokubonelela nge-bandwidth ye-300M. EAP180 ibonelela nge-1 * 100M uplink Ethernet port, enye ezantsi ye-100M Ethernet port kunye ne-RJ11 port port enye. Ngezibuko le-uplink elixhasa i-802.3af POE, i-EAP180 ayiniki kuphela ukusebenza okuphezulu kwe-WiFi, kodwa kunye nonxibelelwano olongezelelekileyo lwefowuni kunye nonxibelelwano ngomnxeba. Iimpawu eziphambili kunye neZinto eziPhambili ezilula ...
Umlawuli we-EAC680 SMB Smart Wireless Access
I-DCN EAC680 sisilawuli sokungena kwi-smart (AC) esenzelwe iinethiwekhi ezingenazingcingo ze-SMB kunye namasebe amakhulu eshishini. Inokudibanisa kunye ne-DCN smart EAP uthotho lokufikelela ngaphandle kwamacingo (ii-APs) ukwenza isisombululo esilawulwa ngaphandle kwe-LAN (WLAN). I-EAC680 ixhasa i-24 * 10/100 / 1000MBase-T kunye ne-4 * 10GbE SFP +) ye-uplink, inokulawula ukuya kuthi ga kwi-520 yee-APs ezingenazingcingo. Isixhobo sibonelela ngolawulo lokufikelela olunamandla lwe-WLAN ngokusebenzisa iinkqubo ezinje ngolawulo lomsebenzisi oluchanekileyo kunye nolawulo, ulawulo olupheleleyo lwe-RF kunye nesecuri ...
Idilesi:I-Digital Technology Plaza, NO.9 Isitalato i-Shangdi 9, iSithili saseHaidian, eBeijing, China
Umnxeba: +86 400 810 9119
Umnxeba:+86 (10) 82707033
Imeyile ukuthengisa @ dcnglobal.com, dcnsales @ digitalchina.com